7 Ny bakalorea sy ny bakalorea tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Ny bakalorea sy ny bakalorea tsara indrindra any Eropa
Ny fikasana ny bachelorette na ny fety Bachelor dia tena ampahany tsara indrindra amin'ny maha-lehilahy mahay sy andriana mari-boninahitra anao. Inona no mety hahafinaritra kokoa noho ny fampivondronana ireo andian-jiolahimboto rehetra hanao zava-dratsy iray any Eoropa? Indrindra alohan'ny hipetrahan'ny olona tsara vintana amin'ny vondrona.
Eoropa dia toerana iray hialana amin'ny fitsangatsanganana antoko. Voafonja isika 7 amin'ny fitsangatsanganana sy bachelorette tsara indrindra any Europe. Avy amin'ny fitsangatsanganana fivoriambe spaoro mankamin'ny fety mandritra ny alina sy ny fiatoana. Noho izany, fehezina ianao hamorona ny fikatsahana ny saina indrindra ho an'ny mpivady vao-manambady.
1. Hédoniste Budget-Saram-pitiavana Bachelorette / Bachelorette any Berlin
Miaraka amin'ny sehatra fisakafoanana mahafinaritra, Berlin dia toerana mahafinaritra ho an'ny fialantsasatra mahafinaritra sy bachelorette mahafinaritra ary mahafinaritra any Eropa.
I Berlin dia malaza amin'ny fety adala sy Oktoberfest ary tonga lafatra amin'ny a fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro. Azonao atao ny manomboka ny fety amin'ny alàlan'ny alàlan'ny sary psy mangatsiaka amin'ilay andian-tsambo malaza any amin'ny lafiny atsinanana. dia, manohy ny fizahan-tany mihidy manokana na mahazo vazivazy ary andao hijanona. koa, Berlin dia trano be dia be, izay nandroahanao ny hantonana rehetra taorian'ny alina nandroahana azy.
2. Bachelorette / Bachelor fitsidihana any Amsterdam
Malaza sy manaitaitra, Amsterdam dia tanàna manota any Eropa ary paradisa kely. Raha mikasa ny fitsangatsanganana bachelorette amin'ny lohataona ianao mankany Eoropa, avy eo Amsterdam no loveliest. Lakandrano manondraka, trano mareva-doko sy kafe mahafinaritra, làlana mivezivezy, ary mazava ho azy fety voninkazo tamin'ny Mey. Ireo fahagagana rehetra ireo dia hahatsapa ho tonga any amin'ny lanitra fahafito ilay ampakarina.
Na izany aza, raha mahaliana faran'ny herinandro adala ianao hankalazana ny fotoana farany amin'ny fahalalahana, avy eo i Amsterdam dia tonga lafatra ho an'ny fety malala-kintana. Atombohy amin'ny Muse Du Sexe mankany amin'ny distrikan'ny jiro mena, ary farano amin'ny fisotroana sy fisakafoanana striptease. Noho izany, fitsangatsanganana bakalorea any Amsterdam dia tsy isalasalana fa fitsangatsanganana tsy hay hadinoina.
3. Bachelorette / Bachelor fitsangatsanganana mankany Prague
Tena ankasitrahan'ireo vehivavy ireo fomba fijery mahafinaritra ao Prague, maritrano, sy ny zavakanto. Ankoatry ny, Ny Prague dia fantatra amin'ny zaridaina labiera misy ny boninkazo avo sy ny bara ronono. Midika izany fa ny toeran'ny Prague dia eo amin'ny toerana tsara indrindra ary manompo ireo zava-pisotro mahafinaritra sy fetsy any Eropa, ohatra, Hemingway akoho. Aorian'ny fisotroana zava-pisotro vitsivitsy raha maniry alina marina ianao, loha hahita hahita izao tontolo izao malaza Prague sehatra ho an'ny alina. Hanasitrana izany maraina mihantona izany, jereo ny toerana misy kafe tsara indrindra ao Prague, Mug Cafe. Ny kafe manokana dia manan-karena sy ny zava-pisotro sakafo matsiro.
Na izany aza, raha tsy te ho very saina ianao amin'ny alina booze, avy eo dia mivoaka ivelan'ny afovoan-tanàna. Ny Prague dia fonenan'ny thermals sy spa maro izay ahafahanao mahazo miangona rehefa avy mitsidika azy ianao lapa voaroaka. Azo antoka fa hahatonga ny ampakarina ho lasa toy ny andriambavy ao angano. Zava-dehibe iray lehibe izay tian'ireo lehilahy ireo dia ny fandehanana renirano mikoriana.
4. Fandehanana any Budapest
Ny maritrano mahafinaritra ary ny renirano Danube mandeha mihodina, manao an'i Budapest ho toerana mahafinaritra ho an'ny fitsipi-pitenenana sy oniversite.
Sotroina sy fety mankamin'ny renirano Danube, mamakivaky ny tanàna miaraka amin'ny fahitana ny maritrano mahafinaritra, dia tsara ho an'ny antoko bachelorette sy ny bakalorea. Safidy lehibe iray hafa dia fialantsasatra amin'ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ireo zazavavy. Budapest dia tanàna lehibe ho an'ny fitsangatsanganana sakafo, izay ahafahanao manandrana divay nasionaly avy amin'i Eger sy Somlo ary manandrana ny lovia Hongariana amin'ny fety iray hankalazana ny fiainana tokana.
Faust Wine Cellar dia iray amin'ireo cellars tranainy indrindra any Eropa sy izay azonao atao mankafy ny divay tsara indrindra ary tsiro ny ranon'omby sy ny sakafo hafa.
5. Fitsangatsanganana Bachelor / Bachelorette Ho any Tirol
Ho an'ny fitsangatsanganana fanatanjahantena be mpitia indrindra sy adrenalinina mankaty Eoropa, ny faritany Tirol any Aotrisy no toerana mety indrindra. Ho tsapanao fa miverina amin'ny fiavianao ianao. Nipetraka manodidina ny afon-dasy, ivelan'ny trano kitay hazo misy sako sy zava-pisotro. Raha andiany ny zalahy fitsangatsanganana fiakarana rock, Rafting, sy hetsika maro hafa any ivelany, avy eo Area47, Safidy mahatalanjona ho an'ny faran'ny herinandro rehetra sy ny fety lehibe.
Tirol dia tonga lafatra amin'ny dia fitsangatsanganana bachelorette, indrindra fa raha sportive ianao ka te hiaina voajanahary amin'ny iray amin'ireo be indrindra toerana tsara tarehy any Eoropa. Ny fomba fijery lehibe sy rivotra mangatsiaka dia tonga lafatra amin'ny fifamatorana ary mamorona fotoana tsy hay hadinoina any anaty ala sy riandranon'i Tirol.
Munich mankany Innsbruck amin'ny lamasinina
Salzburg mankany Innsbruck amin'ny lamasinina
Oberstdorf mankany Innsbruck amin'ny lamasinina
Graz mankany Innsbruck amin'ny lamasinina
6. Nanketo Alpes eto Soisa
Ny fomba manaitra, tendrombohitra, lohasaha, sy riandrano ao ny Alpes Soisa dia toe-javatra tonga lafatra amin'ny dia fitsangatsanganana bachelorette nofinofy tany Eropa. Ny paradisa Soisa dia samy paradisa sy Disneyland ho an'ny andian-jiolahy manaitra. Ohatra, raha tianao ny hetsika any ivelany, dia afaka mandeha milomano ianao raha amin'ny ririnina. na, etsy ankilany, raha fitsangatsanganana lohataona na fahavaratra, avy eo, Trekking, na koa ny fikoropahana ao amina vohitra manintona dia vitsy ny zavatra tokony hatao ao amin'ity toerana mampitolagaga ity.
Na dia fitsangatsanganana am-pitondrana sy bachelorette mankany amin'ny Alps Soisa aza dia mety ho lafo kokoa noho ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro any Berlin na Prague, Mety ho toerana hamoronana fahatsiarovana maharitra mandritra ny androm-piainany izany ary tsy misy vidiny.
Geneva mankany Zermatt nataon'i Trains
Bern ho an'i Zermatt nataon'i Trains
Lucerne mankany Zermatt nataon'i Trains
7. Bachelor / Bachelorette Trip To Aquitaine, Frantsa
Ny fitsangatsanganana bakalorea sy ny bakalorea dia fotoana lehibe ahafahana mandeha amin'ny dia iray, andramo zava-baovao ary tapaho ny làlana manaitaitra. Maninona raha manao an-dahatsoratra izany ary mandehandeha fotsiny amin'ny fandanjalanjana? Glamping dia safidy mahavariana ho an'ny fitsangatsanganana an-tsaina sy fitsangatsanganana bachelorette. Mahatalanjona ny ambanivohitra frantsay toerana hitobiana amam-boninkazo mihaja Mongolianina mihaja eo amin'ny tanimboly frantsay mahavariana miaraka amin'ireo namanao akaiky indrindra.
Dobo filokana iray, voankazo, sakafo maraina amin'ny fandriana, afon-dasy, ary ny manao bisikileta manodidina ny tendrombohitra tsara tarehy dia toa tsy misy fiverenana any aoriana, izay fitsangatsanganana bachelorette rehetra. Ny fitsidihan'ny bakalorea sy ny bakalorea no sasany amin'ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fiainan'ny tsirairay. Noho izany, tokony hankalaza any amin'ny toerana tena tsara indrindra eran'izao tontolo izao ary tanteraka i Eropa noho ny fitsangatsangana nofinofy na ny gadona sy ny bachelorette..
Tena mora ny manofana mpandeha manodidina an'i Eropa ary mitety lalana Save A Train na aiza na aiza toerana sy tanàna 7 ny toerana tsara indrindra amin'ny dia fitsangatsanganana bachelor.
Te-hametaka ny bilaoginay “7 Bachelor And Bachelorette tsara indrindra any Europe” ianao ao amin'ny tranonkalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bachelor-bachelorette-trips-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
licence bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope TravelAlps TravelPrague travelswitzerland TravelTirol